EVY's Kitchen: Cupcake vs Muffin
Posted by Evy at 8:43 PM
Muffin လည်းကြိုက်တယ်။ Cupcake လည်းကြိုက်တယ်။ :)
May Hmom... said...
Thank you so much,Evy .
I also want to know how different Cupcakes & Muffin
ကျေးဇူးပါ အိရေ သေချာ သိသွားတယ် :)
Cupcake နဲ့ Muffin အကြောင်း ဗဟုသုတလေး ယူသွားတယ် EVY ရေ။ ကျေးဇူးပါနော်။
Gelatine cake လုပ်နည်းတွေတင်ပေးပါလား